I-Dongying Shengyu Precision Casting Factory izokhiqiza ngempumelelo isikhunta ngokuya ngobumo obuhlukahlukene. Isikhunta somkhiqizo singahlukaniswa ngokuphumelelayo sibe yisikhunta esiphezulu nesikhunta esiphansi, futhi izinqubo ezihlanganisiwe ezifana nokugaya, i-etching, ne-EDM ziyasetshenziswa. Ukuma nobukhulu bemigodi c...
Enkambweni yokwenza ama-castings anembile, asebenza ngokuphumelelayo ekushiseni kwegumbi, kodwa ngokushesha izinto eziqinile zithululelwa ngokuphumelelayo ekubunjweni komumo wazo othize ukuze zilinde ukuthi ziqine futhi zakhe. Ama-casting amaningi aqinile endaweni Kodwa ashiselwa abe yinsimbi ewuketshezi...
Iyini Inqubo Yemishini
Kalula nje, ukukhanda wukusebenzisa imishini ukucubungula, ukusika, nokucubungula ukwakheka kwendawo yokusebenza. Phakathi nayo yonke inqubo yokukhiqiza, ukuma, usayizi, isikhundla esihlobene nokusebenza kokungenalutho kuyacutshungulwa ngokuya ngephethini nosayizi kumdwebo, okungukuthi, kusetshenzwa...
Uyini Umlando Wokuthuthuka Wokusakaza Okunembile?
Ukusakaza okunembayo kufaka phakathi ukutshala imali, ukubunjwa kwesikhunta se-ceramic, ukubunjwa kwensimbi, ukuphonsa ingcindezi kanye ne-EPC. I-investimenti yokutshala imali, eyaziwa nangokuthi i-wax loss casting, ivame ukusetshenziswa: izinto ezifanele zokutshala izimali (ezifana nopharafini) zikhethwa ukwenza isikhunta sokutshala izimali; Phinda u-st...
Ukwelashwa Kokushisa Kwe-Precision Castings
Ngenxa yezinhloso ezehlukene zokubunjwa okunembayo, kunezindlela eziningi zokwelapha ukushisa, ezingahlukaniswa zibe izigaba ezimbili. Okokuqala ukuthi i-microstructure ngeke ishintshe noma akufanele ishintshe ngokusebenzisa ukwelashwa kokushisa, kanti okwesibili ukuthi i-microst eyisisekelo ...
Indlela Yokwenza I-Independent Innovation In Foundry Enterprises
Uhlaka lohlelo lweshumi nanye lwentuthuko yaseShayina lweminyaka emihlanu luveza ukuthi kuyadingeka “ukuthuthukisa izinga lobuchwepheshe bezimboni ngokusungula izinto ezintsha ezizimele, kulwelwe ukuba sezingeni eliphezulu nobuchwepheshe obubalulekile, kuthuthukiswe ikhono lokuguqula izimpumelelo zesayensi nezobuchwepheshe...
bhalisa Embuzweni Wethu